10 Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba ngololiwe eTshayina > 10 Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China
Uhambo loLoliwe, Ukuhamba ngololiwe eTshayina
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 07/02/2021)
Umhlaba weentsomi, Iidynasties, iinkcubeko, kunye nabantu abakha umlingo omkhulu wase China, ikhaya le 10 uninzi lweendawo ezintle zokutyelela eChina. Yonke indawo iyamangalisa, ukubalisa amabali amandulo kuwo onke amatye eentsika, ibhulorho, namanzi acocekileyo 1000 amachibi.
Okulandelayo 10 uninzi lweendawo ezintle zokutyelela eChina, babe ngabahambi abanomdla kangangamawaka eminyaka, lungiselela uhambo lobomi bonke.
1. Indawo ye-Epic yokundwendwela e-China: Uhlobo lweNdawo yoMhlaba waseZhangye Danxia
Into emangalisa yokwakheka komhlaba, iZhangye Danxia National Park kwiphondo laseGansu iphezulu 10 uninzi lweendawo ezintle zokutyelela eChina. in 2009, "Ilifu elibomvu" ipaki yesizwe yaseDanxia yaba yindawo yelifa lemveli le-UNESCO.
Iimpawu zepaki ze 50 ezikwere zeekhilomitha, ukuphumla emazantsi eentaba zeQilian. lo ukumangaliswa kwendalo kuthathe amawaka eminyaka ukwenza ubuhle obutsala abahambi abavela kwihlabathi liphela. Indawo eyayikade ilulwandle, yatshintsha ngokuthe ngcembe ubume bomhlaba bayo baba ziincopho kunye neendlela, ukusuka kwiorenji ukuya kuluhlaza, intle ngokumangalisayo.
NdingaFikelela Njani kwiDanxia Landform e China?
Ungabhabha uye eZhangye ukusuka eLanzhou ngeyure, okanye thatha indlela ye-eco-friendly yokuhamba ngololiwe. Kuphela 6 iiyure ngololiwe.
2. Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China: I-Yanyang Rice Terrace
Ukuba ufuna iivenkile, ke i-epic adventure ilinde phantsi 3,000 amanyathelo kwiYuanyang masimu erayisi. Uya kuzifumana ezi ndawo zimangalisayo zerayisi kwiphondo laseYunnan, kwiithambeka zeentaba zeAilao. Abantu bakwaHani abanomdla benza le ndawo intle kangaka 2,500 Kwiminyaka eyadlulayo.
'Umkroli onobuchule "wenza a UNESCO zamagugu indawo ezandleni zabo, ecaleni komlambo obomvu ngaphezulu kwe 113 ezikwere zeekhilomitha. Ngo-Novemba lelinye lawona maxesha mahle okundwendwela indawo yesibini eyindumasi ukutyelela e-China.
Ndifikelela njani kuYuanyang Rice Terrace?
Ekuqaleni, Kuya kufuneka ufike kwidolophu yaseKunming, emva koko ngebhasi ukuya eYuanyang. Uloliwe we-bullet oya eJianshui uya kuba yeyona ndlela intle yokuhamba, emva koko uthathe ibhasi ukuya eYuanyang.
3. Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China: Ichibi laseQinghai
Elona chibi liphezulu e-China, Ichibi laseQinghai yindawo yesithathu yokubona indawo eTshayina. Ukuba uthatha isigqibo sokundwendwela eli chibi linomtsalane, Kuya kufuneka uyazi ukuba iLake Koko Nor, kumntla-mpuma weThafa laseTibetan. ngoko ke, AmaTibet kunye neemonki zaseTibet zikuthatha oku kungcwele.
Ukongeza kule nto, imeko-bume yonyaka eguqukayo, yenza i-Qinghai echibini engaqhelekanga kwaye ayifani nezinye iindawo e China. Ungatyelela ngokoqobo iLake Qinghai ehlotyeni, ekwindla okanye entwasahlobo, kwaye ufumane ichibi elahluke ngokupheleleyo lonke ixesha.
Ndifika Njani eLake Qinghai?
Okokuqala, thatha uloliwe uye eXining, emva koko ungathatha ibhasi okanye uqeshe imoto echibini laseQinghai.
4. Zhangjiajie – Iintsika ezinamandla
Iintsika ezifana nezinto, Ipaki yehlathi yaseZhangjiajie yindawo emangazayo e-China. IZhangjiajie yindawo eyodwa yohlobo lwamatye esanti awuyi kuwufumana naphina emhlabeni. Le ndawo ye-epic yokundwendwela e-China ingaphezulu 200 iincopho, izigcawu, kunye neentaba ziphuma nje emhlabeni.
Ukwengeza, Uya kuba nethamsanqa lokudibana nabantu abambalwa abahlala kule ndawo ikwanti, kunye nezilwanyana ezisemngciphekweni njengexhama lamanzi laseTshayina kunye nesalamander enkulu yaseTshayina.
Ndingalufikelela Njani uLwakhiwo lweZhangjiajie?
Ukuba uhambela eBeijing, Shanghai, okanye uXian, emva koko thatha uloliwe oya eZhangjiajie.
5. Jiuzhaigou – Amachibi aneAlpine
Iingxangxasi ezimangalisayo, amachibi, 9 Iidolophana zaseTibetan, kwaye kakhulu ubuhle bendalo, yenza intambo yeJiuzhaigou enye ye 10 Iindawo eziphambili zokundwendwela eTshayina. Uyakufumana iJiuzhaigou kwintaba yeMin Shan, kwaye ngenene ngu Ipaki yelizwe.
Ekuphakameni kwe 2,472 m. uya kufumana iLake yeentyatyambo ezintlanu. Kululungele ngokupheleleyo uhambo ukubulela kwimibala eyahlukileyo, iziphumo zelitye le-travertine yedike, and colorful algae. le 2 iinyani zenza i-Alpine echibini lesiphumo seencopho kunye namanzi aluhlaza ojikeleze izilwanyana eziqaqambileyo.
Ndifika Njani kuJiuzhaigou?
Uya kudinga ukufika eChengdu, ikomkhulu lephondo leSichuan kumazantsi mpuma eTshayina ngebhasi kunye nokubhabha.
6. Iphondo laseNtshona Sichuan – Indawo yokuGcina izilwanyana yaseDaocheng Yading
Ukuba ucwangcisa i-escapade kwindalo entle yase China, ngekhephu, amachibi acwengileyo, kunye nokuhamba iparadesi, ke indawo yogcino lwendalo ye-Yading ikulungele. Uza kuyifumana le ndawo ye-epic kwiphondo laseSichuan e-China, kwaye kungcono wenze ixesha ubuncinci 2-3 iintsuku, Ukufumanisa yonke imimangaliso yayo.
"I-Shangri-La yokugqibela" likhaya labathathu baseChianrezig, Jambeyang, kunye neentaba zeChanadorje, ezenza unxantathu, kwaye apho uya kufumana eyona mbono intle eDaocheng. Ngaphezu, Kungcono uzilungiselele 1,000 amachibi, phakathi kwazo kukho i-Erong "Milk" echibini, kunye neLwandle emihlanu eDanzhen emangalisayo 4,600 mitha.
Ndifikelela njani eDaocheng Yading?
Ukuba ufutshane ngexesha, emva koko ubhabhele kwisikhululo seenqwelomoya saseYading, emva koko uthathe ibhasi yesikhululo seenqwelomoya eya eDaocheng. Unokuthatha nebhasi eya eShangri-La, Ukusuka apho uthathe ibhasi yokubona indawo eya eYading. kunjalo, ukuba ufuna ngokwenene ukufumana le ndawo ye-e-China, emva koko hlala ubusuku eDaocheng.
7. Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China: UFenghuang, Iphondo laseHunan
UFenghuang yenye yeendawo zemveli kwi 10 Iindawo eziphambili zokundwendwela kuluhlu lwase China. Le dolophu igcinwe kakuhle yakhiwa e Qing ubukhosi kwaye igcine imeko yayo yakudala kunye neembono zayo ngaphezulu 300 iminyaka.
ngoko ke, xa ungena kule dolophu inomtsalane, uya kuziva ngathi uhamba umva ngexesha. Izindlu zedolophu ezenziwe ngamaplanga, imizila, iitempile azifunyanwa lixesha kwaye zenza umoya omangalisayo imini okanye ubusuku.
Ngokwamabali, idolophu yafumana igama layo "iPhoenix" xa 2 UPhoenix wayengafuni ukuhamba kuba yayintle kakhulu, bahlala ke bejongile.
Ufika njani kwiFenghuang?
Kukho iibhasi kuphela eziya eFenghuang, akukho loliwe. Ungathatha ibhasi kwiidolophu ezikufutshane eHunan, Njengo Changsha, kunye noZhangjiajie.
8. Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China: Udonga Olukhulu lwase China
I-Great Wall yase China yenye yezinto ezimangalisayo zehlabathi, Ngokucacileyo inezimpawu zethu 10 uninzi lweendawo ezintle zokutyelela eChina.
Ngaphezulu 2,300 Iminyaka yoDonga oluKhulu lwase China ilawula ubume bendawo yaseNtla China, kwaye yeyona nto iphambili kulo lonke uhambo oluya e-China. Ngelishwa, Ukutyhubela iminyaka ngenxa yokukhukuliseka kwendalo kunye nomonakalo womntu 2,000 Iikhilomitha zimkile kulo mmandla ubalaseleyo.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba ukuba uphupha ukuhamba udonga lonke, iyakukusa 18 iinyanga ubuncinci ukugqiba uhambo olukhulu lwase China.
Ndilufikelela Njani uLudwe oluKhulu lwase China?
Ungathatha uloliwe ukusuka eBeijing ukuya kwisikhululo sikaloliwe iBadaling, emva koko uthathe ibhasi yasimahla yokuya kwiofisi yamatikiti eBadaling Great Wall.
9. Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China: Ichibi leQiandao
Ngaphezulu kwe 1000 iziqithi, Ichibi leQiandao yenye yezona ndawo zibalaseleyo ehlabathini, ayeke iTshayina. Uya kulifumana eli chibi lihle kwilizwe laseChunan, Iphondo laseZhejiang, egubungela indawo ye 580 ezikwere zeekhilomitha.
Eli chibi liwaka leziqithi lenziwe ngabantu kwaye lenziwa emva kokudalwa kwedama kwi 1959. Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuya echibini laseQiandao e China, uya kuba nexesha elimnandi lokufumanisa amachibi amaninzi kunye nepaki yehlathi.
Ufika njani kwiLake Qiandao?
The best way to travel to Qiandao lake is by taking the train from Hangzhou to Qiandaohu Station then take the taxi to Ichibi leQiandao.
10. Iindawo ze-Epic zokundwendwela e-China: Idolophu yakudala yaseLijiang
ILinjiang yidolophu yesibini yakudala kule yethu 10 Iindawo eziphambili zokundwendwela kuluhlu lwase China, kunye nenye 4 uninzi lweedolophu ezindala ezigcinwe kakuhle e-China. Iitempile zika Lijiang, Uyilo olwahlukileyo lweNaxi lwezindlu ezindala ezakhiwe ngophahla kunye nenkundla evaliweyo, ngamehlo.
Njengoko uhamba ngeLijiang izitrato cobbled, izibane ezibomvu ngaphezulu, kwaye ufumane ifayile ye- 354 imizila, uyakumangaliswa kwaye uthabatheke yinkcubeko yabantu baseNaxi, kunye nolwakhiwo.
NdingaFikelela Njani kwiDolophu yaseFenghuang yakudala?
Eyona ndlela yokufika eLijiang idolophu yakudala kukuthatha i- Uloliwe waseTshayina kwisikhululo sikaloliwe iLijiang, emva koko ngebhasi okanye imoto.
Apha Gcina A Isitimela, singavuya ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho kwezi 10 iindawo ezininzi yeqhawe ukutyelela China ngololiwe.
Do ufuna ukumilisela iposti yethu "10 Iindawo ezininzi ze-Epic zokutyelela E China”Kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)